१० जुन २०१८ : के तपाईको जन्मदिन आज हो ? यस्ता हुन्छन् आजका दिनमा जन्मिएका मानिस
जेठ २७, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ। जन्मदिनको शुभकामनाको साथै तपाईलाई स्वागत छ बिगुल न्यूजको विशेष प्रस्तुतिमा। आजबाट हामी नियमित रुपमा ती पाठकहरुका व्यक्तित्व र भविष्यको बारेमा जानकारी दिनेछौं जसका त्यस दिनांकको दिन जन्मदिन पर्नेछ। प्रस्तुत छ दिनांक १० को दिन जन्मिएका व्यक्तिहरुका बारेमा जानकारी :
दिनांक १० को दिन जन्मिएका व्यक्तिका मूलांक १ हुनेछ। तपाईको मूलांक एक हुनेछ। तपाई एक राजसी प्रवृत्तिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाई आफू माथि कसैको शासन मन पराउनुहुन्न। तपाई साहसी र जिज्ञासु हुनुहुन्छ। तपाईको मूलांक सूर्य ग्रहद्वारा सञ्चालित हुन्छ। तपाई अत्यन्तै महत्वाकांक्षी हुनुहुन्छ। तपाईको मानसिक शक्ति प्रबल छ। तपाईलाई बुझ्न निकै गाह्रो छ। तपाई जीवन र भविष्यप्रति सदैव आशावादी विचारधारा राख्ने व्यक्ति भएको कारण हरेक स्थितिका सामना गर्नमा सक्षम हुनुहुन्छ। तपाई सौन्दर्यप्रेमी हुनुहुन्छ। तपाईमा निहित अरुलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने कुरा भनेको तपाईको आत्मविश्वास हो। यसकै कारण तपाई सहज रुपमा महफिलमा छाउनुहुनेछ।
शुभ दिनांक : – १, १०, १९, २८
शुभ अंक : – १, १०, १९, २८, ३७, ४६, ५५, ६४, ७३, ८२
शुभ वर्ष : – २०१७, २०२६, २०४४, २०५३, २०६२
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा माता गायत्री
शुभ रंग : रातो, केसरी र क्रिम
कस्तो रहनेछ यो वर्ष ?
यो वर्ष तपाईको लागि अत्यन्तै सुखद् रहनेछ। अधुरा कार्यहरुमा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्यको दृष्टिबाट यो वर्ष उत्तम रहनेछ। पारिवारिक मामिलामा महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ। अविवाहितका लागि सुखद् र अविस्मरणीय स्थिति बन्दै छ। विवाहको योग बन्नेछ। नोकरी पेशाको लागि समय उत्तम छ। पदोन्नतिको योग छ। बेरोजगारका लागि पनि सुसमाचार छ, यसै वर्ष तपाईको मनोकामना पूरा हुनेछ।
प्रकाशित : आइतबार, जेठ २७, २०७५१५:३१
के तपाई आजको दिनमा जन्मनु भएको हो ? यस्तो हुन्छ आज जन्मिएका मानिसका व्यक्तित्व र भविष्य
पुनःनिर्माणसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई !
अब टोल-टोलमा प्रहरीको गस्ती ! काठमाडौँमा साइकल चढेर प्रहरी गल्लीगल्ली पुग्ने !
जीवनमा एकपटक घुम्ने पर्ने नेपालका १० प्रमुख पर्यटकीय स्थल
आज श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको समापन गरिँदै ! शालीनदीमा भक्तजनको भिड ! [फोटो फिचर]
‘नेताले आफ्नो सत्ता जोगाउने काम मात्रै गरे’